Izitoyitoyi: Okwamanje ayingangamlomo komasipala - Bayede News
Imisebenzi yokwakha izindlu ezindaweni zasemakhaya
Bambalwa abangangabaza amava kanjalo nobuchule babaholi be-Ec nomic Freedom Fighters (EFF) bokukwazi ukuxhumana nabantu. Abaholi baleli qembu bayakwazi ukukhomba inxeba kwezokuxhumana bese behlala kulo udaba luze lube ngolwabo futhi nabantu babeseke. Leli khono kaligcini nje kumholi weqembu uMnu uMalema kepha kukhona nakwabanye. Empeleni kalikho iqembu elisondelayo eZitoyitoyini nxa kufikwa kwezokuxhumana, ngobuchule basebenzisa ukuxhumana nabantu kakhulu intsha. Lokhu kwenza ngisho abezindaba kwenye
inkathi bengafuni kepha babalandele ngakho belu ngoba bayakwazi ukuheha besebenzisa ubuchwepheshe.
Lokhu kukwazi ukuxhumana nabantu sekuyisebenzele kakhulu i-EFF kuzwelonke. Kwathi nje iqala ukungenela ukhetho lukazwelonke yabuya nezihlalo ezingama-25. Ngokhetho lwezi– 2014 nokwabe kungokokuqala lingena lameleleka ezifundeni eziningi; KwaZulu-Natal zaba zi-2, eGauteng zaba yisi-8, eLimpopo zaba yisi-6, kwathi eMpumalanga zaba zi-2, eWestern Cape saba si-1, eFree State khona zaba zi-2, nase-Eastern Cape zaba zi-2.
Nokho kukho konke lokhu kubukeka lesisivinini kuzwelonke asibonakali koHulumeni Bendawo – lapha kubukeka kusengumqansa ukuba namakhansela anele ukuguqula izinto. Njengabantu abanamava cishe bayakuqonda ukubaluleka bokuguqula lesi sithombe yikho nje kulolukhetho olungoLwezi beyiphake nxa zonke. Leli qembu ngomlomo womholi walo uMalema limemezele ukuthi lisempini, ukuthi nakanjani lizongenela ukhetho kubo bonke omasipala abangama-257
“I-EFF iyaqinisekisa ukuthi izongenela ukhetho kumawadi, kuzifunda kanye nokamasipala abakhulu kuwo wonke amawadi ayizi-4,468 kulolu khetho oluzayo loHulumeni Bendawo”, kusho lo mholi ngokuzethemba. Kulindeleke ukuthi iZitoyitoyi zethule umqulu wazo wokhetho mhla zingama-26 kuMandulo. Lolu suku balukhethe ngabomu ngoba luqondana nosuku lokuzalwa kukaNkk okaMadikizela Mandela ongasekho. Ukunyakazisa amathambo ale Nkosazane yaseMaMpondweni kunehloso yokumisa izimbango okuyi-African National Congress (ANC) abayisola ngokukhaphela nokulibala ngoKaMadikizela nowayethathwa nosathandwa zinkulungwane ngisho engasekho kwabenyama.
Izwi labo komasipala
Yize benesibalo esincane kuzwelonke kepha izwi labo liduma kunanele wonke umuntu kuleli nangaphandle kwemingcele. Nokho okwenzeka kuzwelonke akuziphindi lapha komasipala
njengoba ngaphandle kokuthi banesibalo esincane kakhulu kepha akukho lapho kugqame ukuthi yibo abayidudulayo kumasipala thizeni njengoba kwenzeka kuzwelonke. Komasipala
abakhulu bagcine nje ukuba nezwi nakhona elivela kuzwelonke ngesikhathi besebenza ngokubambisana neDemocratic Alliance (DA) nokwaba ngumshado owashesha wabhidlika. Okubukeka kuyingqinamba ku-EFF nokufakazeke eminyakeni eyedlule yikuthi abantu, okungabavoti bayishayela ihlombe imizamo yayo kepha uma sekufike isikhathi sokuvota bavotele i-ANC.
Lokhu kubuye kwafakazelwa ngumholi weqembu ngonyaka owedlule ngoLwezi lapho ethi emuva kokwehluleka kwezakhe ukunqoba ukhetho lokuchibiyela kuWadi 6 eMohokane, eFree State: “Ihlazo likini nina eningaphumanga ukuyovota, nani nina enithathe izikibha zethu, nahamba ngezimoto zethu kepha navotela i-ANC”.
Kagcinanga lapho ngoba nakulo nyaka ngesikhathi ekhuluma eAtteridgeville ePitoli usole abantu abadala ngokuba ngabafarisi : “Ngibabonile abantu abadala behubhuza amanga, kuthi uma benezinkinga bagijimele ku-EFF kepha kuthi uma sekuvotwa bavotele i-ANC”.
Esikhathini lapho amaqembu etabalasa ngakwezezimali ukumelelwa ngesibalo esikhulu komasipala kungasho ukwanda kwemali engumnikelo eqenjini njengoba i-EFF ingakaze ikufihle ukuthi amalungu ayo ayanikela kusuka kuzwelonke ukuze kusabalale imilayezo kanjalo nemisebenzi yeqembu. Ngakho ukuqunga isibindi kwayo ingenele ukhetho kubo bonke omasipala kukhomba khona ukuthi bayakholwa ukuthi ekufakeni kwabo inethi kungenzeka
bangabuyi nazo zonke izihlalo kepha kukhona okuyovela bese bakhela kukho. Umbuzo uthi ngabe kulokhu abantu bazoyeka yini ukufarisa ngokuthi banamele lokho okushiwo yi- EFF kepha kuthi uma sebesebhokisini bakhohlwe yiyo.
nguMfo waKwaNomajalimane Sep 17, 2021